WARARKA SOOMAALIYA | MARWALBA KALA SOCO WARAR RASMI AG
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirrada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Kulanka golaha wasiirrada ayaa lagu soo bandhigay warbixinno la xariira shaqooyinka ay…
War qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Uganda ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in ciidamo looga dilay dagaal culus oo maalmo ka hor ka dhacay magaalada Marka ee xarunta gobolka…
Ciidamada amaanka dowlada Soomaaliya ayaa saakay xaafada Black Sea waxa ay ku dilay nin shufto ahaay oo baaran jiray Shacabka Magaalada Muqdisho. Ninka la dilay ayaa waxa oo ku…
Dowlada Sweden ayaa soo saartay wareegto ku aadan hub aruurin dalka oo dhan waxa dalka ku wargaliyeen in lakeeno hubka sharci darada lagu haysto mudo seddex bilood gudahood ah. Wareegta…
17 oktober, 2018No CommentRead More
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug. Madaxweynaha ayaa wehlinaya wafdi ka kooban labada Gole ee Baarlamaanka…
16 oktober, 2018No CommentRead More
War Saxaafadeed kasoo baxay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa lagu sheegay in faro galin ku hayaan maamulkooda Xildhibaano, Senetaro iyo Wasiiro katirsan dowlada Federaalka Soomaaliya. Qoraalka Xaaf kasoo…
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirrada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Kulanka golaha wasiirrada ayaa lagu soo bandhigay warbixinno la xariira…
War qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Uganda ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in ciidamo looga dilay dagaal culus oo maalmo ka hor ka dhacay magaalada Marka ee…
Ciidamada amaanka dowlada Soomaaliya ayaa saakay xaafada Black Sea waxa ay ku dilay nin shufto ahaay oo baaran jiray Shacabka Magaalada Muqdisho. Ninka la dilay ayaa waxa…
Dowlada Sweden ayaa soo saartay wareegto ku aadan hub aruurin dalka oo dhan waxa dalka ku wargaliyeen in lakeeno hubka sharci darada lagu haysto mudo seddex bilood gudahood…
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug. Madaxweynaha ayaa wehlinaya wafdi ka kooban labada Gole…
War Saxaafadeed kasoo baxay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa lagu sheegay in faro galin ku hayaan maamulkooda Xildhibaano, Senetaro iyo Wasiiro katirsan dowlada Federaalka Soomaaliya. Qoraalka…
Geedka tufaaxu waxa uu leeyahay faa’iidooyin badan oo caafimaad waxana laga helaa qayb badan oo kamid ah fiitamiinada jidhku u baahan yahay. Hadaba geedka tufaaxa waxa uu ka…
Dagaalyahanno la rumeysan yahay in ay ka tirsan yihiin Al Shabaab ayaa labo Macalin oo Kenyaan ahaa maanta ku dilay magaalada Mandera gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.…
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, (XFS) mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta qasriga boqortooyada kula kulmay boqorka dalka Sucuudiga, Boqor Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ra’iisul wasaare Khayre…
Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland Eng. C/xakiim C/llaahi Xaaji Cumar Camey, ayaa si Adag uga hadlay Takhriibka Dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaana uu Sheegay inuu yahay Tahriibku Musiibo heysata haatan Umadda…
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirrada…
War qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Uganda ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in ciidamo…
Ciidamada amaanka dowlada Soomaaliya ayaa saakay xaafada Black Sea waxa ay ku dilay nin shufto…
Dowlada Sweden ayaa soo saartay wareegto ku aadan hub aruurin dalka oo dhan waxa dalka…
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada…
War Saxaafadeed kasoo baxay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa lagu sheegay in faro…
Geedka tufaaxu waxa uu leeyahay faa’iidooyin badan oo caafimaad waxana laga helaa qayb badan oo…
DAAWO:Ciidamada Mangoolka oo la ogaaday sababta ay u qubeysan waayeen
Dhageyso:-Qisadii Cumar Bin Khadaab Allaah haka Raali noqdee.
8 oktober, 2018No CommentRead More
Geedka tufaaxu waxa uu leeyahay faa’iidooyin badan oo caafimaad waxana laga helaa qayb badan oo kamid ah fiitamiinada jidhku u baahan yahay. Hadaba geedka tufaaxa waxa uu ka kooban noocyo badan waxana kamid ah. 1- Tufaaxa Cas ee Mareekanka iyada oo uu yahay kan ugu badan ee Aduunka loo dhoofiyo ayaa uu yahay Aragiisu mid…
Dagaalyahanno la rumeysan yahay in ay ka tirsan yihiin Al Shabaab ayaa labo Macalin oo Kenyaan ahaa maanta ku dilay magaalada Mandera gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Sida ay sheegeen Booliska Kenya Macalimiintaasi ayaa Geeriyooday, kadib markii Bam Gacmeed lagu weeraray Iskuul ay ku sugnaayeen oo lagu magacaabo Arabia Boys oo ku yaalla bartamaha…
Dagaalyahanno la rumeysan yahay in ay ka tirsan yihiin Al Shabaab ayaa labo Macalin oo…
Iska rogadii wadday mayd wadareed-ka ee Muqdisho iyo sheeko aan dib dambe uga warrami doonin (Aqri
QARIXII SOOBBE IYO QUDHAYDA: Tani waa sheeko mar haddii aad wariso, mar labaad aan ku…
9 oktober, 2018No CommentRead More